Nanogram - Logic Pic Puzzle - Picture Cross 2.29 အန္းဒ႐ိုက္ APK ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ | Aptoide
7K 39.5 MB 5
Nanogram - Logic Pic Puzzle - Picture Cross ၏ ရွင္းလင္းခ်က္
💡NO WI-FI NEEDED: play the game offline at any time! Solveapicture puzzle whenever you feel like it!
💡DISCOVER beautiful pixel art pictures from different thematic sets in the biggest selection of picture cross puzzle categories yet! Puzzle Packs and logic quest options include famous landmarks, animals, everyday objects and movies
💡SHOW OFF how smart you are by solving logic quest nonograms and daily puzzles with record speed in front of your friends or that special someone you wish to impress!
အဆုံးမဲ့ယုတ္တိဗေဒပဟေlesိများကိုဖြေရှင်း။ ပျော်စရာကောင်းနေစဉ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအနည်းငယ် ပို၍ စမတ်ကျပါစေ။
ကြောက်စရာကောင်းသော pixel အနုပညာသရုပ်ဖော်ပုံများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစဉ်အားလုံးသည်ဘယ်နေရာမဆို၊ လွယ်ကူစွာသင်ယူလွယ်လွယ်။ nonogram logic puzzles (a.k.a. Picross, Griddler, Picture Cross) ကိုကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသည်။
သင်၏ ဦး နှောက်ကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးသော nonograms များဖြင့်စိန်ခေါ်ပြီးဖြေရှင်းနိုင်သည့်ယုတ္တိဗေဒပဟေnewိသစ်တိုင်းနှင့်ပိုမိုစမတ်ကျသည်ဟုခံစားနိုင်သည်။
သငျသညျဇယားကွက်ပဟေlesိနှင့်ရုပ်ပုံပဟေgamesိဂိမ်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လျှင်, သင်လျင်မြန်စွာ nonograms ၏ဆွဲယူရလိမ့်မယ်။
1- အဆုံးသတ်နံပါတ်များကိုကြည့်ပါ။ အတန်းများနှင့်ကော်လံများ၊
2 - လုပ်ကွက်များကိုဖြည့်ရန်နှင့်လျှို့ဝှက်ရုပ်ပုံကိုရှာဖွေရန်ယုတ္တိဗေဒကိုအသုံးပြုပါ။
count မရေမတွက်နိုင်သော ဦး နှောက်လှောင်ပြောင်ခြင်း၊ အလွယ်တကူကျွမ်းကျင်သော nonogram ပဟေ💡ိများကိုဖြေရှင်းပါ။
ids Grid များပေါ်ရှိလုပ်ကွက်များကိုရောင်ရန်နှင့်၎င်းတို့အောက်ရှိဖုံးကွယ်ထားသောရုပ်ပုံများကိုဖော်ပြရန်ယုတ္တိဗေဒကိုအသုံးပြုပါ။ သင်သိပြီးနှစ်သက်သောရိုးရှင်းပြီးပျော်စရာ picross နှင့် nonogram gameplay!
နာရီပေါင်းများစွာ picross ရုပ်ပုံ၏ယုတ္တိဗေဒပဟေhoursိများကိုအမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့ရပါက - အသက်အရွယ်အားလုံးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်များအတွက်ပျော်စရာများစွာ!
O WI-FI လိုအပ်သည် - အချိန်မရွေးဂိမ်းအော့ဖ်လိုင်းကစားပါ။ ရုပ်ပုံပဟေyouိတစ်ခုကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အခါတိုင်းဖြေရှင်းပါ။
cross ရုပ်ပုံအကျယ်ဆုံးပဟေselectionိအမျိုးအစားအများဆုံးရွေးချယ်ထားသည့်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာအလိုက်လှပသော pixel art pictures များကိုရှာဖွေပါ။ Puzzle Packs နှင့်ယုတ္တိဗေဒရှာဖွေမှုရွေးချယ်မှုများတွင်ထင်ရှားသောအထင်ကရနေရာများ၊ တိရိစ္ဆာန်များ၊ နေ့စဉ်အရာဝတ္ထုများနှင့်ရုပ်ရှင်များပါဝင်သည်
log logic quest nonograms နှင့်နေ့စဉ်ပဟေlesိများကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများ (သို့) သင်အထင်ကြီးစေလိုသူတစ် ဦး ဦး ၏ရှေ့မှောက်၌အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းအားဖြင့်သင်မည်မျှမတ်မတ်နေကြောင်းပြပါ။
UTAUTO-SAVE သည်သင်၏ picross ပဟေuzzleိကိုသင်ထွက်ခွာသွားသည့်နေရာမှပြန်လည်စတင်နိုင်သည်။
သင်ဟာ nonogram, griddlers သို့မဟုတ် picross ယုတ္တိဗေဒပဟေmightိများကိုမသိသေးပေမယ့် crosswords နှင့် Jigsaw ပဟေgamesိဂိမ်းများကဲ့သို့သော brainteasers တွေကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုတ္တိဗေဒစိန်ခေါ်မှုများနှင့်နေ့စဉ်ပဟေloveိများကိုသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်။
အရသာတိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းရန်အကြောင်းအရာအလိုက်အဆင့်ဆင့်အထုပ်များ၊ နေ့စဉ်ပဟေlesိများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော Modes များစုဆောင်းမှုကိုခံစားကြည့်ပါ။ လွယ်ကူသောနွေးထွေးသောပုံရိပ်ပဟေlevelsိအဆင့်မှစိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောစိတ်များအထိ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော nonogram ယုတ္တိဗေဒစိန်ခေါ်မှုများကိုကျယ်ပြန့်သောယုတ္တိဗေဒရှာဖွေမှုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကစားနိုင်သည်။
ရရှိနိုင်သည့်ပဟေeveryိတစ်ခုစီကိုအနိုင်ယူပြီး nonogram boards အောက်တွင်ပုန်းနေသော pixel-art ပုံရိပ်များကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏ဓာတ်ပုံစုဆောင်းမှုများလေလေသင့် ဦး နှောက်သည်စမတ်ကျလေလေဖြစ်သည်။
ရုပ်ပုံပဟေgamesိဂိမ်းများအကြားဤပါရမီနှင့်သင်၏ ဦး နှောက်၏စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပါ။
Nanogram - Logic Pic Puzzle - Picture Cross ကဲ့သို႔ေသာ အက္ပ္မ်ား
APK သတင္းအခ်က္အလက္ - Nanogram - Logic Pic Puzzle - Picture Cross